PB vavy Thread Elbow - China Amico
MULTI-LAYER PIPE SISTEM
SORATIM-PIVORANA FOTSY ARY CUTTER
PB vavy Thread Elbow
Ny fantsona Amico PB Mampiavaka ny 1, Ny vokatra vita amin'ny simika fantsom-bika dia maharitra, ny fanoherana ny korosi, manelingelina ny tsy fahampian'ny paikady metaly amin'ity lafiny ity. 2, Mora miondrika na mafana mitete mba hamolavola endrika tsara kokoa, ary manana fahaiza-manaon'ny compression tsara raha mifandray amin'ny fantsona, tsy mora miparitaka. 3, Hitahiry ny fampiasam-bola - be ny fampiasam-bola voalohany, saingy ny vidin'ny fandidiana ambany dia mety ho tafaverina vetivety ny renivohitra fampiasam-bola. . 4, Fantson'ny fifanakalozana hafanana amin'ny tany ambanin'ny tany dia mampiasa polyethylene fantsona avo. Manompo fanompoana ho an'ny 50 ye ...
Seranan-tsambo Ningbo na Shanghai
Term fandoavana: TT na LC
Brand: Amico na OEM
Color: Ivory, Grey, araka ny fangatahana
Mifandraisa aminay Download as PDF
Amico PB pipes Features
1, Miorina mafy ny zava-simika fantson-drano dia mihena, fanoherana ny fanoherana, manelingelina ny tsy fahampian'ny fantsona vy amin'ity lafiny ity.
2, Mora miondrika na mafana mitete mba hamolavola endrika tsara kokoa, ary manana fahaiza-manaon'ny compression tsara raha mifandray amin'ny fantsona, tsy mora miparitaka.
3, Hitahiry ny fampiasam-bola - be ny fampiasam-bola voalohany, saingy ny vidin'ny fandidiana ambany dia mety ho tafaverina vetivety ny renivohitra fampiasam-bola. .
4, Fantson'ny fifanakalozana hafanana amin'ny tany ambanin'ny tany dia mampiasa polyethylene fantsona avo. Ny fiainana fanompoana mandritra ny 50 taona.
5, fiarovana ny tontolo iainana sy fitahirizana angovo: ny fampiasana herinaratra, tsy misy fihoaram-pefy, tahaka ny tontolo iainana, fandotoana tsy misy dikany; Tsy mila mampiasa tilikambo mitsiatsiaka, tsy misy hantonana ivelany, aza mandefa hafanana amin'ny tontolo manodidina.
Tsy misy fiantraikany mafana, tsy misy tabataba; Aza manangona ny rano amin'ny tany, raha tsy manimba ny harena amin'ny rano; Ny vidin'ny fandidiana dia 40 ~ 60% ihany ho an'ny fantsom-pahalazana afovoany mahazatra.
1. Ny vidin'ny angovo sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana - ny rafitry ny geothermal dia mampiasa herinaratra 25-50% tsy mihoatra ny herinaratra mahazatra na fananganana rivotra. Midika izany fa ny hery dia kely kokoa noho ny fandoroana ny solika fôsily izay manimba ny tontolo iainana.
2. rano mafana maimaimpoana na mora vidy - tsy mitovy amin'ny rafi-panafahana sy ny hatsiaka hafa, ny paompy hafanana geothermal dia afaka manome rano mafana maimaim-poana miaraka amin'ny fitaovana antsoina hoe "desuperheater".
3. Fampiononana isan-taona - mitazona mari-pana na dia ny hamandoana ao amin'ny tranonao aza.
4. Fandanjalanjana ho an'ny famolavolana - ny rafi-pamolavola hafanana geothermal dia mamela ny ho mora milefitra ary azo apetraka amin'ny toe-javatra vaovao sy manavao.
5. Aesthetics fanatsarana - ny rafitry ny geothermal dia mora manafina, tsy mitaky tony mangatsiaka, manala ny fitaovana vita amin'ny trano vita amin'ny mahazatra, tsy dia mety ho an'ny fantsona sy ny fikojakojana, ny fanamboarana trano tsara kokoa, manome alalana ireo mpikaroka ary ny tompon'ny trano. andian-tafo.
6. Fikojakojana ambany - hatramin'ny ampahany amin'ny workhorse ao anaty rafitra - ny fantson-tanana - any ambanin'ny tany na ambanin'ny rano dia mila fikolokoloana kely.
7. Ny fizakan-tany sy ny hatsiaka - ny faritra samihafa ao amin'ilay tranobe dia azo atao ny manorana na mangatsiaka amin'ny hafanana samihafa miaraka, izany hoe, ny hafanana avy amin'ny efitranon'ny solosaina dia azo nafindra amin'ny rindrin'ny perimeter ho an'ny fandroana ny ririnina ao amin'ireo tranobe ara-barotra.
8. Fahamarinana - na saika tsy misy faritra mihetsiketsika ary ampahany amin'ireo rakotra ao anaty trano iray dia maharitra sy azo itokisana ny rafi-pandehanana geothermal. Ny fantsonay dia manana androm-piainany mandra-pahatongan'ny 50 taona na mihoatra.
Amico na OEM
1.9mm 4.6mm ~
Ny hatevin'ny rindrina:
Farafahakeliny 50 taona iainana amin'ny fiainana mahazatra
F: Inona ny akora akora?
A: 100% akora madio sy vaovao mai Basell, tsy misy tsiro
A: miankina amin'ny habe samihafa. Azafady mba zahao amin'ny varotra.
F: Inona ny fahaiza-mamokatra? Na ny fotoana fandefasana?
A: Matetika 15 andro ho an'ny boaty 40HQ iray
Q: Inona ny seranan-tsambo fitaterana mahazatra?
A: Ningbo na Shanghai
Q: Inona ny fandoavanao?
A: 30% ambany fandoavam-bola, fifandanjana amin'ny BL Copy na L / C tsy azo esorina
F : Afaka mamokatra arakaraka ireo santionany ve ianao?
A: Eny, azontsika atao ny mamokatra amin'ny alàlan'ny santionany na sary ataonao.
F: Voazaha toetra ny entana rehetra alohan'ny fandefasana azy ianao?
A: Eny, manana sedra 100% alohan'ny fanaterana azy isika
Q: Inona ny politikanao santionany?
A: Ohatra azo alaina malalaka
F: Nahoana isika no mifidy?
(1) Ny vokatra azo avy amin'ny tena izy dia manana kalitao sy kalitao tena tsara.
(2) Miara-miasa amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao ary mahalala tsara ny tsena.
(3) Afa-po tanteraka ny serivisy. Izay olana sy valiny rehetra dia hovaliana ao anatin'ny fotoana fohy.
Taloha: PB 90 ° Elbow
Manaraka: PB Tee
Alao ny vidiny antsipirihany
PB Polybutylene Pipa
Polybutylene Fantson'ny famatsian-drano
Polyethylene Fantson-drano Ho an'ny famatsiana rano
Fantson-tanana PB ho an'ny famatsian-drano
Adiresy: Lalana No68 East Tonghe, Tanànan'i Luotuo, Ningbo, Sina
Mifandray amin'ny olona: Emily